स्मृतिग्रन्थ प्रकाशन एन्ड कम्पनी लिमिटेड – मझेरी डट कम
लेखिदिएँ । पछि आयो एउटा किताब ……. स्मृति ग्रन्थ भनेर । निकै भव्य थियो । अमेरिकातिरबाट छोराहरुले डलर पठाइदिएको कारणले राम्रो गाता, कागज, चित्रहरु देखेर मलाई पनि त्यस्तो असल ग्रन्थको प्रधान सम्पादक हुन पाएकोमा खुसी पो लाग्यो । मैले लेखिदिएको सम्पादकीयलाई यसो हेरें । मैले बठ्याइँका साथ लेखिदिएँछु । अन्धकारमा हानेको ढुङ्गाले झन्डै ता कागलाई नै लागेछ भनेजस्तो भयो ।
‘मेरी माता श्रीमती …… का बारेमा केही लेखिदिनुप¥यो नि सरले, स्मृतिग्रन्थ निकाल्न लागेको’ आग्रहको उरुङ आएको थियो । जसलाई मैले एक झलक पनि देखेको थिइनँ उनका बारेमा पनि मैले लेख्नु पर्ने भो । के लेख्नु होला, नचाहिंदो फुर्काफुर्की जोडेर ? सोचें, अनि लेखिदिएँ बडो महान् नारी विदूषी भनेर जसले अक्षर मात्र चिनेको थियो भन्ने मलाई नै थाहा थियो ।
बरु एउटा लेख मेहेनतसँग लेख्न सक्या भए प्रमोशनका लागि केही बल पुग्थ्यो । सोचें । बरु अलिकति पारिश्रमिक पनि आउँदो हो अलिक मेहनत गरेर लेख्या भए, सोचें । तर के गर्न‘ बाध्यता छ । नलेखी धर छैन ।